Absolut Vodka प्रतियोगितामा २०,००० यूरो जित्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
यदि तपाईंलाई कला मनपर्दछ र तपाईंलाई शौक छ वा तपाईं आफूलाई डिजाईन, पेन्ट वा सिर्जना गर्न समर्पित गर्नुहुन्छ भने, हामी रक्सी ब्रान्डको हातबाट चुनौती प्रस्ताव गर्दछौं। Absolut Vodka.
यो प्रख्यात ब्रान्ड सुरु भएको छ एक प्रतिस्पर्धा जसमा उनले आफ्ना सहभागीहरूलाई उनको नयाँ विश्वव्यापी अभियानको नयाँ निर्माता बन्न प्रोत्साहित गर्छन्। छ Absolut रचनात्मक प्रतिस्पर्धा भनिन्छ.
1 Absolut Vodka विज्ञापन अभियान
2 विज्ञापन र कला
4 पुरस्कार र वितरण मिति
Absolut Vodka विज्ञापन अभियान
Absolut अभियानहरु कला प्रमोट गरेर विशेषता हो। उसको विज्ञापन रचनात्मक छ र सधैंभरि बाहिर आयो मार्केटिंग ईतिहास। यसको स्थिर बोतलको सिल्हूट हो जुन प्रतिलिपि (हेडलाईन) सँगै छ। यो ग्राफिक डिजाइनको साथ फरक हुन्छ जुन सँगसँगै आउँछ, जुन कुनै श doubt्का बिना, सँधै कलाको कामको रूपमा लिइन्छ।
विज्ञापन र कला
धेरै वर्षको लागि, विशेष गरी १ 1985 XNUMX,, भोड्काको यो ब्रान्ड रचनात्मकता र कलाको मद्दतको साथ प्रचार गर्नका लागि समर्पित गरिएको छ र विभिन्न कलाकारहरूको सहयोग विश्व भर बाट।
आफ्नो कलाकारलाई बोतलमा हाल्ने पहिलो कलाकारहरू मध्ये एक थियो एन्डी वारहोल। सहकार्यहरू उहाँसँग सुरु भयो, जससँग लिगेसी निर्माण गरिएको छ। आज हामीसँग एउटा विशेषाधिकार छ स that्ग्रह जसले "इब्सोलुट" शब्दलाई नामको साथ मिलाउँदछ जसले यसलाई चिन्ह लगाउँदछ: एब्सोलुत वारहोल (१ 1986 1999), एब्सोलट क्लेमेन्टे (१ 1987 1986।), एब्सोलट स्कार्फ (१ 1986 XNUMX), एब्सोलट हारि ((१ XNUMX XNUMX), एब्सोलट लेविन्थल (१ XNUMX XNUMX), अरूहरू मध्ये।
केहि राम्रा ज्ञात उदाहरणहरू हेरौं, यो निश्चित हो कि तपाईंले तिनीहरूलाई हेर्ने पहिलो पल्ट छैन।
निरपेक्ष हरि १ 1980 in० मा सिर्जना गरिएको थियो। Haring सबवे र सडक भित्ता चित्रहरु को लागी आफ्नो चित्र को लागी विश्व प्रसिद्ध छ। ऊ मृत्यु, जन्म, लागूपदार्थ, टेक्नोलोजी जस्ता विश्वव्यापी अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम थियो।
सबै थाहा पाउन प्रतिस्पर्धा विवरण हामी उनको प्रवेश गर्नुपर्छ वेबसाइट जहाँ भाग लिन सबै आवश्यकताहरू हामीलाई वर्णन गरिएको छ।
मदिरा ब्रान्डले यस प्रतिस्पर्धालाई एकको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ हाम्रो पेशेवर क्यारियरको लागि प्रक्षेपण गर्न वा नाम कमाउने अविश्वसनीय अवसर।
सामान्यतया, हामीले गर्नै पर्छ खाताको मानहरू र विश्वासहरूलाई ध्यानमा राखेर कलाको एक कार्य बनाउनुहोस् Absolut द्वारा। हामीले बोतलको सिल्हूट डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र यी तत्वहरूका साथ तपाईंले कलात्मक रचना गर्नुपर्नेछ।
विश्वासहरू वा विश्वासहरू जसलाई उनीहरूले यसलाई बोलाउँदछन्, निम्न हुन्:
सबै लिंग एकै हुन्
हामी कहाँबाट आएका हौं भन्ने छैन, हामी सबै मानिस हौं।
सबैजना आफ्नो विचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छन्।
हामी कसलाई मन पराउछौं भनेर छान्न हामी स्वतन्त्र छौं।
ब्रान्डले दिगो र पारदर्शी तरिकाले कार्य गर्नुपर्दछ।
पुरस्कार र वितरण मिति
प्रतियोगिता को विजेता आर्थिक आर्थिक पारिश्रमिक हुनेछ 20.000 यूरो। थप रूपमा, हामी तपाईंको व्यावसायिक क्यारियर विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त सुनिश्चित गर्न सक्छौं। यो बढ्न र हाम्रो कला प्रख्यात गर्न को लागी एक महान अवसर हो।
प्रतिस्पर्धा को मिति तीन हो। हामीले हाम्रो कार्यहरू प्रस्तुत गर्न अन्तिम दिन हाइलाइट गर्नुपर्दछ। यो मिति हो जनवरीको लागि 31 2019. अर्को मिति छ Swimsuit, जुन महिनामा स्थानीय विजेता घोषित हुनेछ र पछि, उहि महिनामा, विश्वव्यापी विजेता प्रकाशित हुनेछ।
यस टुक्राहरू जुन प्रतिस्पर्धामा पेश गरिन्छ सबै मुलुकबाट मान्यता प्राप्त रचनात्मकहरूको निर्मित निर्णायक मंडलले मूल्य र मूल्या .्कन गर्नेछ। यो जूरी सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ को लागी एक सूची बनाउन को लागी हुनेछ स्थानीय विजेता.
दोस्रो चरण प्रत्येक देशको विजेता संग आयोजित गरिनेछ, जसमा उनीहरूले सामना गर्नेछग्लोबल राउन्ड अर्को अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक द्वारा मूल्याated्कन गरिएको।
आरोन सेजार, Delfina फाउण्डेशन को निर्देशक र संस्थापक हो। यो एक गैर नाफा मुनाफा हो जुन विभिन्न गतिविधिहरू मार्फत कलाको अभ्यास फैलाउन र विकास गर्न समर्पित छ।
मिकालेन थॉमस, दृश्य कला भित्र मान्यता प्राप्त छ, एक फिल्म निर्माता र कलाकार हो। उनको कार्यहरूमा हामी महिलात्वको धारणा, महिला लिंगको सौन्दर्य र सौन्दर्यको साझा प्रतिनिधित्वहरू पाउन सक्छौं। उनले पहिलो years बर्ष पहिले Absolut संग सहकार्य गरे र उनीहरु संग फेरि यो अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धा को लागी एक जूरी को रूप मा काम गरीरहेछ।
निर्णायकको तेस्रो सदस्य यस नोभेम्बरमा देखा पर्नेछ हामी सतर्क रहनेछौं!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » Absolut रचनात्मक प्रतिस्पर्धा जीत र २०,००० यूरो
पुडिंगले विश्वको कुनै पनि क्षेत्रको जनसंख्याको मात्रा थ्रीडीमा देखाउँदछ